JINGYE Pressure Cooker bụ nke a na-ejikarị eme ihe n’ime nri juru n’ime ya: dị ka sardine mkpọ, tuna, akwụkwọ nri, nri ehi; pickles ite, agụụ pouch nri, mkpụrụ ite, wdg,
1. Olu: 0.5m³, 1.2m³, 2.0m³ ， 3.5m³ ， 5.0m³ ， 6.0m³ ， 7.0m³;
5.Sterilizing ụdị: mmiri ọkụ ịgba, mmiri ọkụ na-emikpu, uzuoku ụdị;
6.Full-auto PLC na ihuenyo mmetụ;
7.With trolley & tree n'ime, jide ngwaahịa;
1. 1. Ikewapụ iche nke ọgwụ ịga ụlọ ọgwụ na nrụgide nwere ike izute ọtụtụ ụdị nkwakọ ngwaahịa dị iche iche nke ịchọrọ nwoke (ite igwe, iko iko, nkwakọ ngwaahịa na-agbanwe agbanwe, karama PP, wdg), nke ọ bụghị naanị meziwanye usoro ojiji nke akụrụngwa, mana chekwaa ugboro ugboro ntinye ego;
2. Usoro nsị niile na-akwado PLC na-achịkwa akpaka, a na-achịkwa okpomọkụ nkesa na ketulu n'ime mgbakwunye ma ọ bụ belatara 0,5 Celsius, na-echekwa ike; Ejiri ya arụ ọrụ F uru; A ga-echekwa usoro ọgbụgba 99;
3. Emechara usoro ịgba ụlọ niile n'ụzọ siri ike na usoro eburu ụzọ setịpụrụ na-akpaghị aka, ma a kwadebere usoro ahụ na paswọọdụ dị iche iche iji kpochapụ omume nke misoperation. Gbaa mbọ hụ na nchekwa nke ngwaahịa.
4. Adomụta abụọ nchekwa jikoro na-aghọta akpaka N'ịchọpụta akara nke okpomọkụ na nrụgide iji kpochapụ nwere nchekwa ihe ize ndụ.
.Dị Dayameta (mm) Ogologo (mm) Okpomọkụ
(℃) Nsogbu ule (Mpa) Design mgbali (Mpa)
NJD-DZ / P / S / C-0712 700 1200 147 0.44 0.35
NJD-DZ / P / S / C-0918 900 1800 147 0.44 0.35
NJD-DZ / P / S / C-1024 1000 2400 147 0.44 0.35
NJD-DZ / P / S / C-1230 1200 3000 147 0.44 0.35
NJD-DZ / P / S / C-1336 1300 3600 147 0.44 0.35
NJD-DZ / P / S / C-1436 1400 3600 147 0.44 0.35
NJD-DZ / P / S / C-1540 1500 4000 147 0.44 0.35
Nke gara aga: Nrụgide nrụgide
Osote: Tankgwakọta tank